कोरोना संक्रमणबिरुद्ध तीन तहसम्मको योजनामा काम भएको छ : प्रवक्ता डा. देवकोटा - Netizen Nepal
कोरोना संक्रमणबिरुद्ध तीन तहसम्मको योजनामा काम भएको छ : प्रवक्ता डा. देवकोटा
in अन्तर्वार्ता, नेटिजन टिभी, मुख्य समचार, वर्गीकृत, विचार, समसामयिक, स्वास्थ्य
काठमाडांै, ३० फागुन । कोरोना संक्रमणको संभाव्य जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्लान ए, बी र सी गरी तीन तहसम्मको काम गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नेटिजन नेपाल संगको स्टुडियो कुराकानीमा सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले यसका लागि सरकारले आफ्नो तयारीलाई तिब्र बनाएको पनि बताउँनुभयो ।
बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणकाकारण शनिबार मध्यरातबाट बिदेशी नागरिकलाई दिदैं आएको अनअरायवल भिषा बन्द गरिनेछ । चीनबाट नेपाल आउने नाका बन्द गरिएको छ । भारतबाट आउने नाकामा थप कडाई गर्नुका साथै सीमित नाकाबाटमात्र आउजाउ गर्ने प्रवन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको छ ।
कोरोनाबाट जोगिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचनाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम पनि गरिरहेको छ । नेपाली जनतालाई अति आवश्यक बस्तुको आपूर्ति सहज ढंगले उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । कथमकदाचित भाइरसको सङ्क्रमण कुनै ठाउँविशेषमा देखिएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई लकडाउन गर्नेसम्मको तयारी गरेको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्तो अवस्था आएमा पकेट एरिया लकडाउन गरी परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनेसम्मको तयारी सरकारले गरेको छ । आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति एकिकृत गरी व्यवस्थापन गर्ने र मोवाइल अस्पतालसमेत संचालन गरिने छ ।
यसकालागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित् निकायवीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको डा. देवकोटाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बिरामी चेकजाँचकालागि आवश्यकता अनुसार ल्यावको क्षमता बढाउँने र प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । ल्याव परीक्षण जस्ता कामहरू सबै प्रदेशमा विस्तार गरी आईसीयुस्तरको पूर्वाधार तयार गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आवश्यक परेमा सरकारी तथा नीजि सबै अस्पतालको सहयोग लिन सकिनेछ । राजधानीका नीजि र ठूला अस्पतालमा निमोनियालगायत छातीको संक्रमणसाग सम्वन्धित रोगको उपचार गराएका बिरामीको निगरानी गर्न सम्वन्धित निकालाई तालिम समेत दिइएको छ ।
डा. देवकोटाका अनुसार भविष्यमा हुनसक्ने सबै जोखिमबाट बच्नका लागि प्लान ए, बी, सी को पनि परिकल्पना गरिएकोले सरकारका संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्नेछन् ।
विसम परिस्थितिको सामना गर्न समाजका सबै पक्षको भूमिका हुने भन्दै डा. देवकोटाले सबै पक्षले सरकारको अनुरोध, निर्देशन र आग्रहलाई पालना गर्नुपर्ने बताउँनुभयो । यदि कसैले यसको पालना नगरेमा आवश्यक परे सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर परिस्थितिलाई सहज पारिनेछ । डा. देवकोटासंग कोरोना संक्रमण भित्रन नदिनका लागि सरकारले अप्नाएको सतर्कता र संक्रमणको प्रतिकारका लागि गरेका तयारीका सम्बन्धमा गरिएको विस्तृत कुराकानी यो लिंकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
Tags: Bikas Devkotacoronacorona virus